ဝီကီပီးဒီးယား:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (အထွေထွေ) - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဝီကီပီးဒီးယား:VPM မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၏ အထွေထွေ ဆွေးနွေးခန်းသည် အခြားသော ဆွေးနွေးခန်းကဏ္ဍများနှင့် မကိုက်ညီသည့် ဆွေးနွေးချက်များ ရေးသားဆွေးနွေးရန် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤနေရာထက်စာလျှင် ပိုမိုသင့်လျော်မှုရှိပါက မူဝါဒ၊ နည်းပညာ၊ သို့မဟုတ် အဆိုပြုချက်များ စာမျက်နှာများတွင်၊ သို့မဟုတ် – အထောက်အကူအတွက် – အကူအညီ စားပွဲ တို့တွင် ကျေးဇူးပြု၍ ဆွေးနွေးပါ။ အထွေထွေ ဗဟုသုတဆိုင်ရာ မေးခွန်းများအတွက် အမေးအမြန်း စားပွဲကို အသုံးပြုပါ။
၁ မြန်မာတို့၏ လက်ဖက်ရည်စကားဝိုင်း
၂ လူမျိုးစုအမည် ရောထွေးအငြင်းပွားမှု
၂.၁ မြိုလူမျိုး နှင့် အဝခမီလူမျိုး ကို ရောထွေးထားခြင်း
၂.၂ မြိုလူမျိုးနှင့် အဝခမိ ရောထွေးခြင်း မဟုပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း
၂.၂.၁ မြိုလူမျိုးတို့၏ အမည်နာမမူကွဲဟန်စာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုး
၂.၂.၂ ခမီလူမျိုး နှင့် မြို(ခေါ်)ခမိ (သို့မဟုတ်) မြိုခမိ (ယခုအခါ မြိုဟုခံယူ) လူမျိုးတို့၏ မူကွဲဟန်စာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိူးမျိုး
မြန်မာတို့သည် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်သော အလေ့အကျင့်ကို ကိုလိုနီခေတ်မှာပင် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဥ်အခါက ဘီးလတ်ရည်ဟု သုံးနှုန်းခဲ့ကြရာမှ ယခုအခါ လက်ဖက်ရည်ဟု ခေတ်ကာလ အကူးအပြောင်းအောက်တွင် ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါသုံးစွဲလာခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာတို့သည် ရှေးယခင်က လက်ဖက်ရည်ဆိုလျှင် လက်ဖက်ရွက်ကိုအခြောက်ခံ၍ ရေကိုဆူပွက်အောင်ကြိုချက်ကာ ထည့်၍သောက်သောအရည်ကို လက်ဖက်ရည်(ဖန်ခါးရည်)ဟု သုံးစွဲခဲ့ခြင်းလည်းရှိသည်။ (ယခုအချိန်ထိပင် အချို့သော ဒေသများတွင် သုံးစွဲလျှက်ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။) လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်သော ယဥ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကို ဖွံ့ဖြိုးပြီး မြို့ပြယဥ်ကျေးမှုဟု ဆိုပါလျှင် လွန်မည်မထင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်သော အလေ့အထကို မြို့နေလူထုများအကြား ပိုမိုတွေ့ရှိနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်း၊ သူငယ်ချင်းများ စုပေါင်းကာ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး အစရှိသဖြင့်ရောက်တတ်ရာရာ (အားသန်ရာကို) ပြောဆိုကြရင်းဖြင့် တစ်နေ့တာပင်ပန်းမှုတို့ကို အပန်ဖြေလေ့ရှိကြပါသည်။ မြို့ပြလူမှုအစဥ်အလာတစ်ရပ်မှ အခြားသော ကျေးရွာများထိတိုင် ကူးဆက်ကာ ယနေအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကြီးများကို တွေ့မြင်ကြရပေမည်။ အဆင့်မြင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား တောရော မြို့ပါမကျန် ထွန်းကားလျှက်ရှိသည်။ ထိုအစဥ်အလာသည် ကောင်းသည်များရှိသကဲ့သို့ ဆိုးသည်များလည်းရှိသည်။ အကောင်းနှင့်အဆိုး တွဲလျှက်ရှိသော လူမှု့အဆောက်အအုံထဲတွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စကားဝိုင်း ယဥ်ကျေးမှုသည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဟု ပြောရပေမည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ယနေ့ လူငယ်၊ လူရွယ်များ ဂိတ်ဆော့ကြခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်နေကြသည်။ မိမိအနေဖြင့် ထိုသို့ အချိန်ကုန်ဆုံးနေသည်ကို လွန်စွာနှမြောမိသည်။ အချိန်သည် လူ၏တန်ဖိုးဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ အချိန်သည် ပြန်လည်ဝယ်ယူ၍မရသော တစ်ခုတည်းသော သဘာဝ၏ တန်ဖိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပင်။ ထို့အတူ ရှု့ထောင့်တစ်ခုမှ ပြောင်း၍ကြည့်မည်ဆိုပါလျှင် ရှေးယခင်ကထက် လူငယ်များသည် ပို၍စုစုစည်းစည်းဖြစ်လာကြသည်။ ထိုမှတစ်ဖန် အကောင်းဘက်သို့ ဦးတည်ပြောင်လဲသွားပါလျှင် နိုင်ငံတော်သည် ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ရောက်အောင် အဆိုပါလူငယ်၊ လူရွယ်များက တွန်းတင်ပေးနိူင်မည်လည်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် လူငယ်တို့ စုစုစည်းစည်းရှိသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကြီးများတွင် ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက်များထားသင့်သည်။ ထိုသည်က တံခါးပိတ်ထားသော စာကြည့်တိုက်ထက်ပို၍ကောင်းလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လူငယ်တို့ရှိသော နေရာများသို့ အလင်းတံခါးပေါက်များ ထားရှိရန်အကြံပြုလိုခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
--Nay Wun Thit Insein (ဆွေးနွေး) ၀၉:၃၀၊ ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)နေဝန်းသစ်(အင်းစိန်)
@Yomeo:, @မြိုလူမျိုးနွယ်:, @Mro(Mru) people: မြိုလူမျိုး၊ မရူစာလူမျိုး၊ အဝခမီလူမျိုးစတဲ့ စာမျက်နှာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာမျက်နှာ ရွေ့ပြောင်းခြင်း၊ စာမျက်နှာသစ် ဖန်တီးခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းများ မပြုလုပ်မီ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီနေရာမှာ အရင်ဆုံး ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်။ အငြင်းပွားနေတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် မဖြေရှင်းသေးဘဲ စာမျက်နှာတွေ ရွေ့ပြောင်းနေတာက စာဖတ်သူတွေအတွက် ရောထွေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နားလည်သဘောပေါက်အောင် ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်။ ကျနော် နားလည်သလောက် ပြောပြရရင် မြိုလူမျိုးနာမည်နဲ့ လူမျိုးစု နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ မရူစာ/မြူ/မရူ လို့လဲခေါ်တဲ့ မြိုလူမျိုးစုနဲ့ အဝခမီလို့လဲ ခေါ်တဲ့ မြိုလူမျိုးစု ဆိုပြီး နှစ်ခုကွဲနေတယ်။ ဝီကီသဘောအရ စာမျက်နှာနှစ်ခုမှာ သံတူကြောင်းကွဲမှတ်ချက်လဲ ထည့်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြိုလူမျိုး ဆိုတဲ့ အမည်ပါ ဆောင်းပါးကိုပဲ နှစ်ဖက်စလုံးက ရယူဖို့ ကြိုးပမ်းနေသလို တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်နားလည်သလို ဟုတ်မဟုတ်လဲ ဖြေကြားပေးပါဦး။ ဖြေရှင်းချက်များမရမီမှာ စာမျက်နှာတွေကို မူလအခြေအနေတွေမှာပဲ ကာကွယ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၃၅၊ ၁၀ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
မြိုလူမျိုး နှင့် အဝခမီလူမျိုး ကို ရောထွေးထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆွေးလိုတာက အဝခမီလူမျိုး ကို မြိုလူမျိုး ဆိုပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့ အချက် အရင် မှာ Mro people -wikipedia သာ ရှိပြီး ယခုအခါမှာ Mru people (Mrucha) -wikipedia ဟု ပြောင်းလဲ လိုက်ခြင်းသည် ။ အဝခမီလူမျိုးတို့က မြိုလူမျိုးနေရာ ကို ဝင်ယူနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်သည် ။ ဤ သို့မဟုတ်မမှန် ရေးနေခြင်းသည် အဘယ်မှာ အမှန်တရား ရှိလိမ့်မယ်နည်။ မြို(မရူ)လူမျိုး နှင့် ခမီလူမျိုး/ မြို(ခေါ်)ခမီ (သို့မဟုတ်) မြိုခမိ (ယခုအခါ မြိုဟုခံယူ)တို့၏ အမည်နာမ မူကွဲဟန်စာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုးရှိသည်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
မြိုလူမျိုးနှင့် အဝခမိ ရောထွေးခြင်း မဟုပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
မြိုလို ဆိုရာတွင် သုံးခုကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ၁. မြို (ချင်းပြည်နယ် ဆမီးဒေသ တွင် နေထိုင်သူ) ၃. မြို(ဝါကုန်း) ( ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် မြို ၊ ခမိ၊ ခမီး အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း ခံရသူ ချင်းပြည်နယ်နေ မြိုတို့နှင့် ဘာသာစကားတူ ပြီး ဆက်ဆံရေး ရှိသူ၊ ချင်းတို့က မြို(ဝါကုန်း)ဟု ခေါ် ဆိုခြင်းခံရသူ) ၂. မြို (မရူစား) စစ်တကောင်းဒေသနေထိုင်သူ၊ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ မြို (ချင်းပြည်နယ် ဆမီးဒေသ တွင် နေထိုင်သူ) ချင်းပြည်နယ်တွင် မြိုအဖြစ်ရှိနေပြီး ၊ သမိုင်းလာရာ ဆမီးဒေသတွင် လက်ရှိထိ မြိုအဖြစ်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရတ့သို ဘာသာစကားတွင် မြို(ခမိ) လက်ရှိရခိုင်တွင် မြိုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ခမိ အဖြစ်လည်းကောင်း ခေါ် ဆိုမှုတွင်ဘာသားစကား ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း တူညီနေပါတယ်။
၂။မြို(ခမိ) ( ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် မြို၊ ခမိ၊ ခမီး အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း ခံရသူ ချင်းပြည်နယ်နေ မြိုတို့နှင့် ဘာသာစကားတူ ပြီး ဆက်ဆံရေး ရှိသူ၊ ချင်းတို့က မြို(ဝါကုန်း)ဟု ခေါ် ဆိုခြင်းခံရသူ)
မြို(ခမိ) လို့ ဆိုရာတွင် လက်ရှိချိန်ထိ သမိုင်း သုတေတီတို့၏ ဖော်ပြမှုတွင် မြို ၊ မြို(ခမိ) ၊ ခမီးလို့ သုံးနှုန်းကြပါတယ်။ ဒါဟာ မီးချောင်း၊ ပီးချောင်း၊ ကုလားတန် တလျှောက်နေထိုင်သော မြိုတွေကို များနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ မြိုအား ချင်းလူမျိုးတို့က မြို(ဝါကုန်း) လို့ ခေါ် ဆိုခြင်းတွင် မရူစား များအား ဆိုလိုခြင်း မဟုပ်ပဲ မြို(ခမိ) တို့အား ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ မြို (မရူစား) စစ်တကောင်းဒေသနေထိုင်သူ မရူစား (မြို) သည် လင်ကြဲ ဟု အစောပိုင်းသမိုင်းတွင် တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တွင် မရူစားဟူ၍လည်းကောင်း ဒေသခ မြို(ခမိ)တို့က ဒါတ်ဟု၍လည်းကောင်းခေါ် ပါတယ်။
ပလက်ဝ ဒေသ ကီမာတောင်ခြေတွင်မှ အနောက်ဘက်တွင် သွားကြောင်း ခူမီး သမိုင်းတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။  ဒီလူမျိုးများဟာ စစ်တကောင်း တောင်တန်းဒေသတွင်သာ နေထိုင်ပြီး ရခိုင်သမိုင်းတွင် ဖော်ပြမှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါတယ်။  --Yomeo (ဆွေးနွေး)  ၁၀:၅၈၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
ဤနေရာတွင်မြိုလူမျိုးကို (၃) မျိုးဖြင့်ဖော်ပြရှင်းလင်းပါမည်။ မိမိအခေါ် ၊နီးစပ်ရာလူမျိုးအခေါ်၊ နေထိုင်ရာဒေသအခေါ် ၊နှင့် နိုင်ငံခြားသားအခေါ်ဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှိရာ - နီးစပ် ရာလူမျိုး ရခိုင် နှင့် ဗမာတို့က မြို(Mro), မျို(Myo)ဟုခေါ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားကုလားတို့က မြုံ (Murong)ဟုခေါ်သည်။ မိမိကိုယ် မိမိတို့က မရူ(Mru)ဟုခေါ်ပါသည်။ဤ မြို(Mro),မြုံ(Murong),မရူ(Mru) အရေးအသားရပ် (၃)ခုမှ မူကွဲဟန်ရှိသော အရေးအသားအမျိုးမျိုး တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်နုတ်ရလျှင်- မြို(Mro)ဟူသော ဝေါဟာရအပြင် မြို့ဟူ၍လည်းကောင်း ၊မျိုဟူ၍လည်းကောင်း ၊ မြိုစာဟူ၍လည်းကောင်း၊ မြိုဆာ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ဒတ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊တောင်မြိုဟူ၍လည်းကောင်း၊
တောင်မရိုဟူ၍လည်းကောင်း၊လောင်းဟူဟူ၍လည်းကောင်း၊တောင်မျိုဟူ၍လည်းကောင်းမူကွဲစာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်သည်။အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအလို- Mro are also known as Mroo,Moroo,Mro-cha, Mro-sa, Dak, Kuki(or)langye, Launghu, Taung Mro, Taung Moroo,Taung Myo written by differently the Mro(Mru) reffer to the tribe. မြုံ(Murong) ဟူသော ဝေါဟာရအပြင် မြုန် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မြုမ်ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ မရောင်ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ မြုံဂျာဟူ၍လည်းကောင်း မူကွဲဟန်စာလုးံပေါင်းအရေးအသား အမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်သည်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအလို - Murong are also known as Murung, Moorang, Morung written by differently the Mro(Mru) reffer to the tribe. မရူ(Mru) ဟူသော ဝေါဟာရအပြင် မြူဟူ၍လည်းကောင်း၊မြူစာဟူ၍လည်းကောင်း၊မရူစာဟူ၍လည်းကောင်း၊မြူဆာဟူ၍လည်းကောင်း၊မရူဆာဟူ၍လည်းကောင်း၊တောင်မြူဟူ၍လည်းကောင်း၊တောင်မရူဟူ၍လည်းကောင်းမူကွဲဟန်စာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်သော်လည်း မြို(မရူ) လူမျိုးကိုပင် ရည်ညွန်းဖော်ပြသည်။အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအလို - Mru are also known as Maru, Mru-cha, Maru-cha, Mru-sa, Maru-sa. Taung Mru, Taung Maru written by differently the Mro(Mru) reffer to the tribes.ေ ဖာ်ပြပါမူကွဲစာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုးသည် မြိုလူမျိုး တစ်မျိုးကိုသာ ရည်ညွန်းဖော်ပြကြောင့် မိမိတို့အချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု မူလည်းကောင်း ၊ ရခိုင့်ရာဇဝင်သမိုင်း၊ မြန်မာ့ရာဇဝင်သမိုင်း ၊သုတေသနပြုစာတမ်းကြီးများ အခြားစာအုပ်မျာစွာက ထောက်ခံလျှက်ရှိပါသည် ။ ၎င်း မူကွဲဟန် စာလုးံပေါင်း အရေးအသားအမျိုးမျိုးများသည် ခမီလူမျိုး / မြို (ခေါ်)ခမိ (သို့မဟုတ်)မြိုခမိ(ယခုအခါတွင် မြိုဟုခံယူ)တို့နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသည်ကို မတွေ့ရှိပေ။
ခမီလူမျိုး နှင့် မြို(ခေါ်)ခမိ (သို့မဟုတ်) မြိုခမိ (ယခုအခါ မြိုဟုခံယူ) လူမျိုးတို့၏ မူကွဲဟန်စာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိူးမျိုး[ပြင်ဆင်ရန်]
ခမီလူမျိုးတို့၏အမည်နာမ စာလုးံပေါင်းအရေးအသား မူကွဲဟန်အမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြရာတွင် ခမီ (၃)အုပ်စု ဖြင့် ဖော်ပြမှသာလျှင် ပြည့်စုံပေမည်။ ၁။ အရိုင်းခမီ(ခူမီး) ၂။ အဝခမီ (ခမီ) ၃။ မြို(ခေါ်)ခမိ (သို့မဟုတ်)မြိုခမိ (ယခုအခါ မြိုဟုခံယူ) တို့၏ မိမိအခေါ် ၊နီးစပ်ရာလူမျိုးအခေါ် ၊နေထိုင်ရာဒေသအခေါ် နှင့် နိုင်ငံခြားသား အခေါ်ဟူ၍ အမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်သည် ။ ယင်း (၃)အုပ်စုတို့၏ လူမျိုးအမည်နာမ မူကွဲဟန်စာလုးံပေါင်း အရေးအသားအမျိုးမျိုးတို့မှာ ထပ်တူရှိကြောင့် တွေ့ရပေမည် ။
အရိုင်းခမီ(ခူမီး) ဟူသောဝေါဟာရအပြင် တွေ့နိုင်သော အရေးအသားများမှာ အရိုင်းခမီ၊ ခမွီး(ခူမီး) ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခူမီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခွေးမွေးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊
ခွေးမြီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ခမွီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမွေ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမွီ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ကုလာတန်ခူမီး ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ စာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုးကို တွေ့နိုင်သည် ။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအလို - Ahraing(Khumi) are also known as Ahraing Khami, Kwemyi(Khumi), Khumi, Khwemyi, Khami(Khumi) , Khami, Khamee, Kumi, Khwemye, Kami, Khwe-mee, Kwemi, Kaladan Khumi, Eastern Khumi,Hkamie written by differently the Khumi reffer the tribe.
အဝခမီ(ခမီ) ဟူသော ဝေါဟာရအပြင် တွေ့နိုင်သည့် အရေးအသားအမျိုးမျိုးများမှာ ခမွီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမွေ ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမွီဟူ၍လည်းကောင်း ၊ အဝခမီဟူ၍လည်းကောင်း၊
ခွေးမြီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ဝါကုန်းဟူ၍လည်းကောင်း ၊ဘကုန်းဟူ၍လည်းကောင်း၊ ခမီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမီဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခေမွီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ စာလုးံပေါင်းအရေးအသားအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း ခမီလူမျိုးကိုရည်ညွန်း ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အလို- Awa(Khami) are also known as Khamyi, Khemyi, Khami, Khimi, Kami, Khwe-myee, Khwemyi, Kwemi, Vakung, Wa kung, Khamee, written by differently the Khami reffer to the tribes. မြို(ခေါ်)ခမိ (သို့မဟုတ်)မြိုခမိ (ယခုအခါမြိုဟုခံယူ) ဟူသော ဝေါဟာရ အပြင် ခမွီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမွေးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ အဝခမီဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမိဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ဝါကုန်းဟူ၍လည်းကောင်း ၊ဘကုန်းဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခွေးမွေးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခမီးဟူ၍လည်းကောင်း ခမီဟူ၍လည်းကောင်း၊ ခွေးမြီးဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ခေမီး ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အရေးအသားအမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုငိသည် ။ သူတို့ကိုသူတို့ ခေါ်သည့်အခါမှာ ခမီ ဟုခေါ်သည်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအလို Mro-Khami are also known as Khamyi, Kamyi, Awa Khami, Kami, Wa kung, Va kung, Khwemyi, Khamee, Khimi, Khwe-mee, Kimi, written by differently the Khami reffer to the tribe. မြို(ခေါ်)ခမိ (သို ့မဟုတ်) မြိုခမိ (ယခုအခါမြိုဟုခံယူ) ဝတ်ဆင်မှုသည်ေဖာ်ပြပါ ခမီ (၃)အုပ်စုတ ွင် အမည်နာမ စာလုးံပေါင်း အရေးအသား အမျိုးမျိုးသော ခမီွီး ၊ ခမီး ၊ ခမိ၊ အဝအခမီ ၊ အရိုင်းခမီ သည် ဤ (၃)အုပ်စုတွင် ထပ်တူရှိကြောင်းတွေ့ရသည် ။ ယင်းသို့ လူမျိုးအမည်နာမ ထပ်တူသည်မှာ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှ ဆင့်သက် ဆက်နွယ်လာမှုရှိသော လူမျိုးစုမှာသာ တွေ့နိုင်သည် ။ ထို့အပြင် ပထဝီနယ်မြေ တူသည် ။ဘာသာစကားပြောဆို ဆက်စပ်မှု ၇၀% ကျော် တူညီကြောင့်လည်းလေ့လာတွေ့ရှိသည် ။ သို့ဖြစ်လျှင် ရခိုင့်ရာဇဝင်သမိုင်းကျမ်း ၊ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း ၊မြန်မာ့သမိုင်း စာအုပ် များနှင့် သုတေသနပြုစာတမ်းကြီးများတွင် ပါရှိသော ခမွီး ၊ ခမီး ၊ ခမိ ၊ အရိုင်းခမီ ၊အဝခမီ စာလုးံပေါင်း အရေးအသားအမျိုးမျိုးသည် ဤ (၃) အုပ်စု ကို ရည်ညွန်း ပြကြောင့် တွေ့ဆနိုင်ပေသည် ။ မြို (Mro) ,မရူ(Mru) ,မြုံ( Murong) အမည်နာမတို့နှင့်ကား ဤခမီ (၃)အုပ်စု တို့နှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိသည်ကို မတွေ့ရှိပေ။မြိုလူမျိုးနွယ် (ဆွေးနွေး) ၀၆:၅၄၊ ၁၀ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
@မြိုလူမျိုးနွယ်: ရှင်းလင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်တွေ့သလောက် Myanmar Information Management Unit ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဘာသာစကားမြေပုံ (မြန်မာ) နဲ့ (အင်္ဂလိပ်) ကို ကိုးကားပြုပြီး ပြောရရင် မြင်မိသလောက်က နာမည်ကို မြန်မာလို အသံထွက်ပြီးရေးရာမှာ ရောသွားတာဗျ။ Mro / Mru ကို နီးစပ်အောင် အသံထွက်ရေးတော့ နှစ်ခုစလုံး မြို ဆိုပြီး ဖြစ်နေတာ။ အဲဒါကို ကွဲပြားသွားအောင် Mru - မရူ နဲ့ Mro ကို အခြားအမည် ခမီ/ခမွီး ဆိုပြီး ခွဲခြားရေးလိုက်တော့ မြို(မရူစာ) နဲ့ မြို(ခမိ) လို့ ဖြစ်သွားရော။ ဒီအငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးချက် ၁၊ ဆွေးနွေးချက် ၂ နဲ့ ဝီကီရဲ့ မူဝါဒတွေအရ မြိုလူမျိုး ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာကို ရခိုင်လူမျိုးကြီးအုပ်စုဝင် မြိုလူမျိုး (မရူစာ) အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပြီး၊ ချင်းလူမျိုးကြီးအုပ်စုအောက်က မြို(ခမီ) အတွက် ခမီလူမျိုး နဲ့ အဝခမီလူမျိုး စာမျက်နှာနှစ်ခုကို ပေါင်းပြီး ခမီလူမျိုး စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖို့ ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ လတ်တလောရှိနေတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးအုပ်စုအောက်က ခမီးလူမျိုး စာမျက်နှာကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆွေးနွေးချက် ၂ အရ ခမွီးလူမျိုးအမည် ပြောင်းပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆွေးနွေးချက် ၁ မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ချင်းလူမျိုးအောက်က အောင်ခမီ ဆိုတာ အဝခမီကိုပဲ ဆိုလိုချင်တာလား၊ သီးခြားတစ်ခုလားဆိုတာကို မပြောတတ်သေးပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၈:၀၉၊ ၁၀ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
မြိုလူမျိုးနှင့် အဝခမိ ရောထွေးခြင်း မဟုပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း မြိုလို ဆိုရာတွင် သုံးခုကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ၁. မြို (ချင်းပြည်နယ် ဆမီးဒေသ တွင် နေထိုင်သူ) ၃. မြို(ဝါကုန်း) ( ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် မြို ၊ ခမိ၊ ခမီး အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း ခံရသူ ချင်းပြည်နယ်နေ မြိုတို့နှင့် ဘာသာစကားတူ ပြီး ဆက်ဆံရေး ရှိသူ၊ ချင်းတို့က မြို(ဝါကုန်း)ဟု ခေါ် ဆိုခြင်းခံရသူ) ၂. မြို (မရူစား) စစ်တကောင်းဒေသနေထိုင်သူ၊ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။မြို(ခမိ) ( ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် မြို၊ ခမိ၊ ခမီး အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း ခံရသူ ချင်းပြည်နယ်နေ မြိုတို့နှင့် ဘာသာစကားတူ ပြီး ဆက်ဆံရေး ရှိသူ၊ ချင်းတို့က မြို(ဝါကုန်း)ဟု ခေါ် ဆိုခြင်းခံရသူ) မြို(ခမိ) လို့ ဆိုရာတွင် လက်ရှိချိန်ထိ သမိုင်း သုတေတီတို့၏ ဖော်ပြမှုတွင် မြို ၊ မြို(ခမိ) ၊ ခမီးလို့ သုံးနှုန်းကြပါတယ်။ ဒါဟာ မီးချောင်း၊ ပီးချောင်း၊ ကုလားတန် တလျှောက်နေထိုင်သော မြိုတွေကို များနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ မြိုအား ချင်းလူမျိုးတို့က မြို(ဝါကုန်း) လို့ ခေါ် ဆိုခြင်းတွင် မရူစား များအား ဆိုလိုခြင်း မဟုပ်ပဲ မြို(ခမိ) တို့အား ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပလက်ဝ ဒေသ ကီမာတောင်ခြေတွင်မှ အနောက်ဘက်တွင် သွားကြောင်း ခူမီး သမိုင်းတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီလူမျိုးများဟာ စစ်တကောင်း တောင်တန်းဒေသတွင်သာ နေထိုင်ပြီး ရခိုင်သမိုင်းတွင် ဖော်ပြမှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမြေပြင်တွင် ဒီပြဿနာများကြောင်း သုတေသန သေချာပြုလုပ်ပြီး ရေးသင့်တဲ့ကိစ္စရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးတစ်မျိုး ဖြစ်တည် ရပ်တွင် သမိုင်း အပေါ် တွင် မှီတင်သောကြောင်း သမိုင်းကြေင်း မလွဲစေဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
--Yomeo (ဆွေးနွေး)  ၁၀:၅၈၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၀ (UTC) — Yomeo (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 17:52, 17 May 2020
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား:လက်ဖက်ရည်ဆိုင်_(အထွေထွေ)&oldid=515709" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၇:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။